Football Khabar » रामोस संसारकै सर्वोत्कृष्ट डिफेन्डर !
रामोस संसारकै सर्वोत्कृष्ट डिफेन्डर !
स्पेन तथा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका कप्तानसमेत रहेका डिफेन्डर सर्जियो रामोस अक्सर आलोचनामा पर्छन् । खेलक्रममा मैदानमा बढी कारबाहीमा पनि पर्छन् । उनको आचरण र स्वभाव निकै आक्रामक रहेको बताइन्छ । हुन पनि हो– उनले करिअर दौरान पाएका रेकर्डधारी रातो कार्डको संख्याले पनि यसलाई साबित गर्छ ।
तर, हाल पिएसजीबाट खेलिरहेका ब्राजिलका खेलाडी नेइमारले भने रामोसलाई संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट र सामना गर्न कठिन डिफेन्डर रहेको बताएका छन् । हालै ‘ग्लोब स्पोर्ट’सँग कुरा गर्दै नेइमारले रामोसलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट डिफेन्डरका रूपमा छानेका हुन् ।
‘फुटबलक्रममा मैदानमा जे–जे भए पनि म रामोसलाई ज्यादै सम्मान गर्छु,’ नेइमारले भनेका छन्, ‘मैले सधैं रामोसको विषयमा बोल्दै आएको छु ।’
नेइमारले रामोस सामना गर्न ज्यादै कठिन डिफेन्डर रहेको बताए । ‘मैले आजसम्म जति डिफेन्डरविरुद्ध खेलें, तीमध्ये रामोस सबैभन्दा कठिन डिफेन्डर हुन् । उनले विपक्षीका लागि उच्च तयारी गरेका हुन्छन्,’ नेइमारले थपे, ‘मेरा लागि उनी संसारकै उत्कृष्ट डिफेन्डर हुन् ।’
प्रकाशित मिति २३ पुष २०७६, बुधबार १८:०४